Unokuba NeWebhu 2.0 Ingxaki Xa ... | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 3, 2008 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Emva kokudibana nomlutha omtsha wonxibelelwano, UGqirha Thomas Ho, Ndatsaleleka kwenye yeenkonzo awayezisebenzisa, Iprofilactic.com.
Ividiyo engentla (cofa apha kwiposti) yiwijethi endiyenzileyo ndisebenzisa inkonzo yeProfilactic. Luluhlu lwazo zonke iisayithi zeWebhu eziyi-2.0 endinazo… ungazifumana kulwakhiwo lwam olutsha Ngephepha. Ndicinga ukuba ndinengxaki!
Ukuba ungowenye yezi sayithi, qiniseka ukuba undongeza kuluhlu lwabahlobo bakho! 😉
NgoJanuwari 3, 2008 ngo-9:03 PM
Hehe, yingqokelela onayo apho
Umbuzo omnye, zingaphi kwezo ndawo usebenza ngokwenene? 😉
NgoJanuwari 3, 2008 ngo-9:13 PM
Mhlawumbi ndisebenza malunga nesinye esithathwini kubo… ezinye ziyenzeka manqaphanqapha. Ngamanye amaxesha andindwendweli iinyanga ezimbalwa – kodwa ndiye ndihlale kwisiza iiyure.
Konke kwinto enye? Ixesha elininzi kakhulu!